Microsoft Office 365 ne SharePoint: The Perfect Combination | ITS
Microsoft Office 365 ne SharePoint: The Perfect Combination
Microsoft Office 365 uye SharePoint
SharePoint uye Office
Bata Microsoft Knot
Microsoft Office vane chido chekuve chikafu chekushanda kwebasa rimwe nerimwe, uye Office 365 yakangobatsira urongwa hunoonekwa. Cloud security firm Skyhigh Networks yakaona kuti hutungamiri ndiyo yakanyanya kushandiswa gore-based instrument instrument by client tally. Chimwe chezvakanakisa zvikuru zvezvikwata zvinonyatsozivikanwa ndezvokuti semitemo inobatanidza nedzimwe bhizinesi rinobatsira bhizinesi, zvichivandudza zvose zvinobudirira uye zvinobudirira.
As Office 365 inoshandiswa kuti iite zvishoma nezvishoma, saka inoshandisa SharePoint, sangano reMicrosoft rinoshanda pamwe chete. Kushandisa SharePoint, mapoka anogona kubatanidzwa pane zvimwechetezvo, uye zvinyorwa zvinowanikwa zvishoma nezvishoma. Panzvimbo pokushungurudzwa kwemashoko matsamba mberi uye kumashure, nyanzvi dzinogona kupinda mune imwe nzvimbo uye dzinoona kushandurwa kwekupedzisira kwebhuku rimwe nerimwe.
Kuti uve wakagutsikana chaizvo, ivai sezvazvingaita, zvirongwa zviviri izvi zvinofanira kuratirana kune umwe neumwe, zvakaenzana nezvinoitwa mumhuri isina kuchena. Hezvino zvimwe zvinhu zvakati izvo IT magenius anofanirwa kufunga pamusoro pekushandisa Microsoft Office 365 uye SharePoint munharaunda yakadaro uye kuvaita kuti vashande zvakanaka pamwe chete.
Kuti uite izvi zvisingabatanidzi basa, kubatanidza SharePoint kuHofisi 365 kunoitwa kuburikidza neConnect to Office orders mu SharePoint Server. Ikoko, iwe unogona kusanganisira, kutarisira, uye kubuda neshamwari ne software. Chero zvazvingaitika, tsanangudzo yekubatanidza matanho maviri iyi ichangopfuura ihwohwo husiku hunokosha - uye chikamu chiduku chemuitiro. Boka rako rinofanirawo kuronga mberi nguva iyo iwe uchashanda sei nevakaroorana vatsva.
Kunyange zvazvo kuongorora kuti zvipi zvinogona kupedzisa kuburikidza ne SharePoint, vatungamiri vanofanira kusarudza avo vanofanira kupiwa maonero uye kuchinja kodzero dzekugoverana kweBhuku rimwe nerimwe, uye kuti kodzero idzodzo dzichave dzichitarisa sei pamusoro pemaitiro ekufambira mberi. Sezvo vashandi vachienda mberi nekunze, kuvaka imwe nzira uye hurongwa hwekutenderwa kushandiswa maererano nekuitwa nenzira yakakodzera inokurumidza.
Kushandura kwepachipiri kunoita basa rakanaka rowanano, uye SharePoint inoratidzira kuti ingasununguka zvakadini nenzira iyo inotaura nehofisi ye365 nevaridzi vayo. Sezvo Microsoft inoratidzira pane peji yepaiti, SharePoint inoratidzika kumugumo wekupera kuburikidza neprogram yewebhu, kwavanogona kutarisa pamusoro pekugadzirisa kwezvikamu. Vatengi vanogona kutarisa zvinyorwa, kutumira mafaira kune OneDrive, kushanda pamwe chete nevamwe, kana kugovera mafaira aripo kumapoka avo. Kamwe chete, zvinyorwa zvinogona kugoverwa kusangano rose kubva mukati mechikamu. Icho chinonyanya kushandiswa chinoita kuti zvive nyore kuti boka rese rione kuti chii chiri kuitika uye chinoita kuti zvive nyore kusvinura kuburikidza chero chirongwa chebhu.
Isati yasvika pakukwirirana kwekushandira pamwe zvishandiso seSharePoint, kutonga kwekushandura kwakange kuri kurota kwakaipa - zvisinei nevekupedzisira kwevatengi. Kare kare, apo nyanzvi yakaita chigwaro muMicrosoft Word kana Excel uye yakatumira kuburikidza ne email, mubhadhari aigona kungoona kuongororwa patsva. Kunze kwekuti mubhadhadzi anoshandiswa Nzira dzeKushandura asati agadzirisa chirongwa, boka racho raizofanira kudzokera shure kana kuchinja kunofanira kunge kwakashandurwa.
Asi, nhasi, hukuru hunonzi Microsoft SharePoint kwete kungoparadzanisa nezvikanganiso zvakabva kumarudzi akasiyana asi sezvo munhu wese ari kushanda munzvimbo yakafanana, iyo inosanganisirawo shanduko yezvekushandura inoita kuti vatengi vaongorore zvakasiyana-siyana zvebhuku.
Pasinei nechokwadi chokuti pane zvigadzirwa zvakasiyana-siyana zvinosvikeka, Microsoft PowerPoint inove ichiri chiridzwa chinonyanyozivikanwa chekutumirwa. Chero mamiriro ezvinhu, neichi chitsva chekubatanidza, iwe haufaniri kunge uine nzvimbo yakafanana yekupa kune vashandi vebhizimisi. Kushandisa SharePoint, unogona kupa matauriro ako ePowerPoint kumakambani nevashandi pasi pose vane zvingoro zvishoma. Pasinei nokuti uri kushandisa sei pamwe chete nehurukuro yevhidhiyo kana kuzvipira, izvi zvinoenderana zvichakubatsira kuchengetedza nguva nezvinhu.
Mune zvibvumirano zvakanakisisa zvehukama, zvikamu zvinoshanda kusimbirana. SharePoint highlights inosanganisira ins iyo Microsoft Office zvinhu uye zvinyorwa zvakawanda zvevashandi. Chimiro pakati pezvinonyanya kukosha ndeye DocuSign, iyo inogona kuwedzera kuisa mazano kune zvibvumirano, mazano, uye mamwe magwaro. Sezvo chikamu chikuru cheicho chinotaridzwa mukati SharePoint, nyanzvi dzinogona kuita kuti zvinetso zvakaoma zvisinganyanyi kuoma, kuchengeta zvose munzvimbo imwe chete zvishoma zvinoda kutevera.Microsoft Training Courses & Certification
Microsoft Office 365 yakatora software yakanyanyozivikanwa yeofisi yegore, zvichiita kuti zvisizvo zvisingatarisirwi kutarisira hurumende. Panguva iyo apo Office 365 inosanganiswa ne SharePoint, vatungamiri vanogona kuita nheyo apo vashandi vanogona kuita pasina vazhinji vekambani yakasimudza uye vagovera kune vamwe vari kunze. Chigadzirwa chekupedzisira chichava kukura kwekubudirira, izvo zvinoreva kuti munhu wose achaita zvakanyanya kuderera, achibatsira bhizinesi richikurumidza kukura.
Sezvo mutungamiri achitarisira kubatsirwa kubva kune zvinhu izvi zvinonyatsozivikanwa zveMicrosoft, pane zvimwe zvaunoita iwe unogona kutora kuti uve nechokwadi kuti une unyanzvi hwakakwana nekudzidza kuita kuti imba iite basa. Kune vamwe vari kutarisira kuumba ruzivo mukushandisa Microsoft Office 365 uye SharePoint, danho rekutanga rinogara richiwana Microsoft MCSA: Office 365 certification.
Kana uchangopedza Office 365, shandisa kushamwaridzana kwako naMicrosoft kunzvimbo inotevera ne MCSE: Kubudirira kukunda SharePoint.
SharePoint Online Vs SharePoint Pa-Premises
Nhanganyaya kuGDPR: Ndiani, chii, nguva, nei, uye kupi kune GDPR
Kubatsirwa kweTIL Certification & Nei ITIL inodiwa?
Kunzwisisa Microsoft Dynamics 365
Kuda kweKuchengetedzwa kweKuchengetedzwa kweZvizivi mu 2018
DevOps - Ramangwana re IT Industries
Zvakakosha sei CCNA? Chii chatinofanira kuziva pamusoro peCCNA?
Kugadziriswa neAWS Certification